Hlola iikholeji zeNdwendwe eNdiya | Xhagamshelana nathi kwi-91-993.702.7574
Hlola iipakethiji zeNdwendwe zaseIndiya
IIndiya Eyinkimbinkimbi - umhlaba weentlobo-hluko luhlanga oluqhayisa ubomi. Fumana i-charm yangempela ye-Indiya, kunye ne-Sand Pebbles 'Explore India Packages Tour. Isitrato ngasinye kunye neendlela, i-alcove kunye ne-crevice ine-quintessence engenakukuphelelwa nje. Kwiphondo ngalinye le-Indiya linenkcubeko kunye nezithethe ezizodwa ezinika isizwe esinamandla umoya. I-Explore yethu ye-India Tour Packages ibandakanya zonke ezinye izithenjwa ongazithandayo. Iintlobo ezinotyebileyo zaseIndiya ziye zanqoba ukutsala kubahloli bamazwe avela kwihlabathi lonke. Iintaba ezinqamlekileyo zeengqameko, amachibi amahle kunye nemifula, iindawo ezinqabileyo ezibonakalayo, iimpawu ezibonakalayo zendalo, ukujonga ubomi bendalo bendalo kunye nokunye ... yonke into ongacinga ukuyihlola iNdiya, unokucinga ukuhlola iNdiya. I-Explore yethu ye-India Tour Packages yenziwe ngokukhethekileyo ukuhlola ukuhlukahluka.
East India: Ummandla olawulayo wobukhosi obuninzi, u-East India unenkcubeko eqinile kunye neengcambu zonqulo. Iimpawu eziqingqiweyo ze-Iconic kunye namatempile amnandi, izitampu zeenduli kunye negadi zeeyi, iindawo zokuphila kwendalo kunye neziqhumane eziqhoqhobala, imifula kunye neelwandle ezingenagqabileyo zibaleka kakuhle kubahambi bezoshishino.
North East India: Ubuncinci buhlola, umhlaba ongaqondakali we-northeast ngokungenakufaneka indawo eyimfihlelo yokutyelela. Ngokuqinisekileyo izulu lingachangekanga. Ifihlwe kwiintaba ezingenasiphako kunye neendawo ezihambayo ze-Himalayas, eNyakatho-mpuma ye-Indiya yincinci yokuphandwa, enye yehlabathi kunye nokuma phakathi kwezona ndawo zibalaseleyo eNdiya.
ENdiya eNtshona: Ucebile kwimbali, ngokomoya, kwiindidi ezintle kunye nenkcubeko, eNdiya eNtshona India inikeza iindlela ezahlukeneyo zokuhamba kwindawo efanelekileyo. Lo mmandla uquka iziqithi ezinqabileyo ezikhenkcezayo, izitrato ezithambileyo zeenduli, iindawo ezihamba phambili, iindawo zokuhlala ezikumkani zobukhosi, izinto ezinamaqhinga, amaziko ohambo, amaziko anqabileyo kunye nobomi bendalo.
South India: INdiya yaseMzantsi Afrika ikwazi ukwenza konke okufunwa ngumthengi. Kukho izikhululo eziphakamileyo zeenduli, izilwanyana zasemanzini, iindawo zokuhlala zasendle, izikhumbuzo zembali zamandulo, iziqhumane eziqhaqhaqhaqhekileyo, iimvula zamanzi kunye neendawo eziphambili.
Central India: I-Central India, eyaziwayo ngeendlela zayo ezihlukeneyo, yindawo yeendawo zasendle kunye neepaki. Ngaphandle kwezilwanyana zasendle, zineentonga ezinkulu kunye nezikhumbuzo, iindawo zentlanga, indawo yokunethezeka, kunye neendawo zokuhamba ezihamba phambili; Inene eIndiya inika kwiindwendwe zayo idiza ehambelana nayo.
Khetha naluphi na lwethu Phonononga Iikholeji zeeNdwendwe zaseNdiya ukwenza iholidi lakho libe likhunjulwe.